रेड वाइन पिउनु स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुनसक्छ ? | Badalpari
रेड वाइन पिउनु स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुनसक्छ ?
Badalpari आइतबार, मंसिर १५, २०७६ १२:४४:५१
मदिराका कारण विश्वभरीमा हरेक वर्ष दशौं लाख मानिसहरुले मृत्युवरण गरिरहेका छन् । त्यही पनि मानिसहरुले हजारौं वर्षदेखि मदिरा पिउँदै आइरहेका छन् ।
पछिल्ला केही दशकहरुमा वाइनले एउटा प्रतिष्ठा हाँसिल गरेको छ । त्यो के हो भने यो पेय पदार्थ स्वास्थका लागि असाध्यै राम्रो छ । खासगरी रेड वाइन । यसको सम्बन्ध लामो उमेर तथा मुटुको रोगको जोखिमलाई कम गर्नका लागि उपयुक्त मान्न थालिएको छ ।
तर, के वास्तवमै वाइन हाम्रो स्वास्थको लागि लाभदायक छ त ? अथवा, योभन्दा पनि पहिला सवाल के उठ्छ भने हाम्रो लागि राम्रो कुरा के हो ? जब कुरा वाइनको आउँछ । अधिकांश व्यक्तिहरु राम्रोको अर्थ मुटुको फाइदासँग जोड्छन् ।
यद्यपि, अधिकांश मानिसहरुलाई के कुरा थाहा छैन भने क्यान्सर र मदिराबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । उक्त सम्बन्धको पुष्टि थुप्रै अनुसन्धानहरुले गरिसकेका छन् । हरेक हप्ता एक बोतल वाइन पिउनु भनेको धूम्रपान नगर्ने पुरुष तथा महिलालाई समेत क्यान्सरको नजिक पुर्‍याउनु जस्तै हो । अर्थात, एक बोटल वाइनले पुर्‍याउने हानि पुरुषहरुले पाँच वटा चुरोट पिउने तथा महिलाहरुको दश वटा चुरोट पिउनाले हुने हानि बराबर छ ।
बेलायतको वेल्सस्थित पब्लिक हेल्थ विभागका नीति-निर्देशक मार्क बेलिस भन्छन्-‘धुम्रपान तथा क्यान्सरका बीचको सम्बन्धलाई अति नै प्रचारित गरिएको छ । तर, मदिरा तथा क्यान्सरको सम्बन्धलाई त्यसरी प्रचार गरिएको छैन । किनभने यसको जिम्मेवारी मदिरा उद्योगमाथि थोपरिएको छ । ती उद्योगहरुले आफ्ना उत्पादनहरु कम बिक्री होस् भन्ने कहिले चाहँदैनन् ।’